Khilaafkii Is Maamulka Kililka Shanaad Ee Itobiya Oo Cirka Maraya, Wasiir Shide Oo Shalay Jigjiga Soo Gaadhay Iyo Xogihii Ugu Dambeeyey Xaalada Taagan – somalilandtoday.com
(SLT-Jigjiga)-Xaaladda Khilaafka siyaasadeed ee Madaxda Kililka shanaad ee Itoobiya gaar ahaan Madaxweynaha maamulkaasi iyo Guddoomiyaha xisbiga maamulkaasi xukuma ayaa waxa uu u muuqdaa mid taagan iyada oo aan la ogayn halka xaaladdu ku dambayn doonto.
Guddoomiyaha xisbiga haya talada deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Shide ahna Wasiirka Maaliyadda heer Federaal ee dalka Itoobiya ayaa shalay soo gaadhay magaalada Jigjiga.
Wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in gudoomiye Axmed Shide markii uu gaadhay magaalada Jigjiga soo dhawayn loogu sameeyey garoonka diyaaradaha ee Wiil- Waal Airport. Madaxweynaha deegaanka soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cagjar oo khilaaf u dhaxeeyey gudoomiye Axmed Shide ayaa ka mid ahaa dadkii soo dhaweeyey. Gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaalida Itoobiya Axmed Shide ayaa safarkan uu ku yimid magaalada Jigjiga waxa uu la xidhiidhaa diyaar garawga loogu jiro qabashada shirweynaha xisbiga haya talada dawlad deegaanka iyada oo wali khilaafkii labadan nin u dhaxeeyey aan xal kama dambays ah laga gaadhin. Sidoo kale gudoomiye Axmed Shide ayaa kulamo la qaadan doona madaxda dawlada deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee madax dhaqameedka, kuwaas oo la filayo in lagaga wada hadlo sidii loo shaqayn lahaa horumarinta deegaanka.
Madaxweynaha deegaanka soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar ayaa hore u sheegay in la soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyey gudoomiyaha xisbiga ahna wasiirka maaliyada ee dawlada federaalka ah ee Itoobiya Axmed Shide, isaga oo sheegay in hada laga shaqaynayo horumarinta deegaanka.